ကျွန်တော်နှင့် ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်က ကောင်လေးတစ်ယောက် | မာသင်
ကျွန်တော်နှင့် ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်က ကောင်လေးတစ်ယောက်
ငွေကြေး တို့၊ လခ တို့ကို ခဏမေ့ထားပြီး ကျွန်တော် တို့အားလုံးမှာ ရူးရူးသွပ်သွပ် ထမင်းမေ့ဟင်းမေ့ လုပ်နိုင်တဲ့ အရာ ကိုယ်စီ ရှိကြပါတယ်။
ဒါကို ပဲ အချို့က ဝါသနာ လို့ခေါ်ပြီး၊ အချို့က passion လို့ခေါ်ကြပါတယ်။
အဲဒီ ဝါသနာက အလုပ်နဲ့သွားကိုက်ညီတဲ့အခါ လူတစ်ယောက်က အောင်မြင်မှုဆိုတာ ဖြစ်လာပါတယ်။
အောင်မြင်နေတဲ့ လုပ်ငန်း၊ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကို မေးကြည့်ပါ။
ငွေကြေးကြောင့် လုပ်နေတာလား၊ ဝါသနာရူးသွပ်မှုကြောင့်လုပ်နေတာလား လို့မေးကြည့်ပါ။
Passion ဆိုတဲ့ အရာကို ခံစားမိပါလိမ့်မယ်။
တစ်နေ့က ကျွန်တေ်ာဆိုင်တစ်ဆိုင်ဆံပင်သွားညှပ်တော့ ဆိုင်က ကောင်းလေးတစ်ယောက် လက်မှာ ထိုးထားတဲ့ ထူးခြားတဲ့ တက်တူး ပုံလေးတပုံတွေ့ မိပါတယ်။
ကက်ကြီးတစ်ချောင်း နဲ့ ဘီးတစ်ချောင်း ပုံကို တက်တူးထိုးထားတာပါ။
တက်တူးဆိုတာ အခြားပုံတွေကိုသာ တွေ့ရလေ့ရှိပြီး ကိုယ့်အလုပ် (သို့) ကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုယ်စားပြုတဲ့ပုံ ကို ထိုးတယ်ဆိုတာ တွေ့ရခဲပါတယ်။
သူ့ ရဲ့အလုပ်ပေါ်မှာ ရူးသွပ်မှု ၊ စိတ်ဝင်စားမှု၊ passion ရှိမှု စတာတွေကို ခံစားမိပါတယ်။
အဲဒီ တက်တူးပုံ ကို မြင်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်…..
“အဲဒီလို ကိုယ့်ရဲ့ အလုပ် တစ်ခု ကို ကိုယ်စားပြု တဲ့ ပုံ ကို တက်တူး မဖြစ်မနေ ထိုးရမယ်ဆိုရင် ဘယ်လို အလုပ်မျိုး ကိုယ်စားပြုတဲ့ပုံ ဖြစ်လိမ့်မလဲ ?? ” လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မေးမိပါတယ်။
အဖြေက။ ။ ကျွန်တော့်နာမည်ထိုးထားတဲ့ ဘောပင်ဖောင်တိမ်လေးတစ်ချောင်း နဲ့ ကင်မရာတစ်လုံး ပါ။ (နှစ်ခုစလုံးက ကျွန်တော် ရူးသွပ်တဲ့အလုပ်ကို ကိုယ်စားပြုလို့ပါ)
ကိုယ့် ရူးသွပ်တဲ့ အလုပ်တစ်ခု၊ လခဆိုတဲ့အရာ၊ ငွေကြေးဆိုတဲ့အရာ ကို မေ့ထားပြီး ထမင်းမေ့ဟင်းမေ့ ဝါသနာပါပါ နဲ့ လုပ်ချင်တဲ့အရာတစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ပုံလေးတစ်ပုံကို တက်တူးထိုးရမယ်ဆိုရင် ….
လွတ်လပ်စွာ …. မန့်ခဲ့ပါ။